सिमकोटमा स्थापना भएको वालगृृह मापदण्ड बिपरीत
११ चैत्र । सदरमुुकाम सिमकोट मा संचालन रहेको वालगृृह मापदण्ड बिपरीत संचालन भएको पाइएको छ । वाल गृहको अवस्थाका वारेमा अनुुगमन गर्ने क्रममा वाल गृृह संचालन सम्वन्धि निर्देशिका बमोजिम नचलेको पाइएको हो । विगत केही वर्ष देखि सिमकोट हुम्लामा वाल गृृहका रुपमा संचालन…
रोल्पाका १२१ विद्यार्थीले एसइई दिन नपाउने
४ चैत । रोल्पाका १२१ जना परीक्षार्थी यस वर्षको एसईई परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने भएका छन् । विद्यालयमा दैनिक हाजिरी नपुगेका कारण उनीहरु परीक्षामा सामेल हुन नपाउने भएका हुन् । शिक्षा नियमावलीअनुसार विद्यार्थी विद्यालयमा ७५ प्रतिशत हाजिर हुनुपर्ने प्रावधान छ । विद्यालयमा…
फुलचोकीमा हराएका जोनको जिवितै उद्दार
तस्विर : प्रकृति अधिकारी १८ माघ । हाइकिङका लागि फूलचोकी गएर फर्किने क्रममा बेपत्ता भएका १७ वर्षीय विद्यार्थी जोन तामाङको ६ दिनपछि बुधबार जिवितै उद्दार गरिएको छ । उनको काठमाडौंको बीएण्डबी अस्पतालमा उपचार भइरहेको…
चिसोबाट शिशुलाई कसरी जोगाउने ?
१२ पुस । पुस र माघ सामान्यतया वर्षको अत्यधिक चिसो हुने समय हो । हिमाली भेगमा हिमपात र तराइमा सितलहरले जनजीवन अझ कष्टकर हुन्छ । यतिबेला सबै व्यक्ति चिसोको असरबाट जोगिनु त पर्छ नै । आमाबुवाको लागि नवजात शिशुलाई कसरी जोगाउने ? भन्ने चिन्ताको…
१० पुस । सहकारीमार्फत् विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको विद्याज्योति बहुमुखी सहकारी संस्थाको ११ औं साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । सोमबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित सभाले टिकाराम शर्माको अध्यक्षतामा ११ सदस्यिय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । समितिको उपाध्यक्षमा शारदा ढकाल, सचिवमा भीम बहादुर रोकाय, कोषाध्यक्षमा…